ITECHNICOLOR PORSCHE YENZIWE NGUMCULI WEMIAMI KUNYE NORICK ROSS BESIYA KWIFANDESI - IIMOTO KUNYE NEERIDES
ITechnicolor Porsche Yenziwe nguMculi weMiami kunye noRick Ross besiya kwiFandesi
Umzobi we-Abstract kunye noyilo lweemoto zexabiso eliphezulu u-Rich B. Caliente wenza ifandesi kwi-Porsche 911 epeyintwe ngesandla. I-NFT # RBC9ELEVEN Porsche kuthiwa yeyokuqala imoto yodidi eluhlobo lwayo ukuthengiswa njengemoto ebonakalayo kunye nomsebenzi wobugcisa wedijithali.
5 imibono emikhulu yoyilo lophahla lwepatio
Kum, kubaluleke kakhulu ukuba nento ebonakalayo, uxelele uCaliente Ingxelo yeRobb . Ke yinto efana nokujija kwam kwi-NFT, apho unento eyi-capsule yedijithali, kodwa unento onokuyonwabela ebomini bokwenyani.
Isityebi B. Sishushu
ukukrazula iiTattoos zoonyana
UCaliente, umhlali waseMiami oziqhenyayo, wayenoncedo ngomsebenzi wokupeyinta onomtsalane, wamema uRick Ross ukuba ancede kuyilo olungabonakaliyo. Andiqinisekanga ncam ukuba uRoss wayenaliphi igalelo, kodwa ophumeleleyo ngeBhaso leGrammy wongeze utyikityo lwakhe kwimoto ukuze achukumise ubunyani.
Ngaphandle komsebenzi wepeyinti omangalisayo, imoto ikumgangatho wefektri, kunye ne-3.0-litre 6-cylinder injini phantsi kwentloko. Ingaphakathi likwafaka omabini amasayineli amadoda afakwe kwizihlalo zesikhumba, kunye nesihloko kwi-albhamu kaRoss ka-2021 Sisityebi Kunokuba Ndakhe Ndaba , ezisezakukhululwa.
Iinwele zamadoda zohlukaniswe ecaleni
Kuthathe igcisa iiveki ezimbini ukuyigqiba, ngombala ongaqondakaliyo okhangeleka ngathi uCaliente ulahle ipeyinti emotweni kwaye ngandlela thile wenza ubugcisa.
Ifandesi yePorsche iya kuqala ngoJuni 4-Juni 14 nge Slashdot . Iibhidi ziya kuqala kwi- $ 305,911, nge-305 emele ikhowudi yendawo kaMiami kunye ne-911 emele imodeli yePorsche. Abaxhamli bezicelo zexabiso baya kuba nakho ukuhlawula kwi-cryptocurrency ye-Ethereum, kunye nenye yemali eyenziwe kwintengiso isiya Isiseko seIrie .
Bona ngakumbi malunga - Umatshini okhethekileyo weLiver Rover ka-1998 oyi-110 Camel Trophey ukwiNtengiso
Iingcamango zoodadewethu ze-2
izimvo zamatye ngokujikeleza indlu
Ingelosi kunye needemon imikhono ye tattoo